Friday December 11, 2015 - 02:20:33 in Daily News by Super Admin
Ciidanka Sirdoonka Somalia ayaa la sheegay ineysan ka warqabin qabashada Sarkaalka muhiimkaa maxaa yeelay guutadda Gaashaan waxeey hoos tagaan Sirdoonka Mareykanka ee xarunta ku leh Xeradda Xalane.
Ninka qaraxa gaariga ugu xiray Hindiya Haji oo ka mid ahaa Hay’ada Sirdoonka Somalia ee NISA Iyo guutadda Sahanka AL-Shabaab ayaa deganaa qol ku dhegan qol ay ku nasan jirtay mararka qaarna seexan jirtay Hindiya Haji.wuxuuna dhismahaan ka mid yahay dhismooyin ay leedahay Hay’adda amaanka Dowladda Federalka Somalia.
Ninka dilay Saxaafiyadda Soomaaliyeed wuxuu tira ka lix jeer kulan la yeeshay Wasiirka Warfaafinta Somalia Mohamed Abdi Hayir Maareeye kaas oo gacan weyn ka geystay shirqoolka lagu khaarijiyay Saxaafiyadda sida ay Waagacusub u xaqiijisay gabadhii ugu dhaweyd Hindiya oo lagu magacaabo Muno Abdi.
Wasiir Xayir Maareeye ayaa la sheegay iney isku dhaceen Hindiya Haji isagoo kadibna bilaabay inuu shaqaalaha SNTV iyo Radio Muqdisho u sheego iney Hindiya Haji tahay Korneyl ka tirsan Ciidanka Sirdoonka iyo Nabadsugidda Somalia ayna madax u tahay koox fadhigoodu yahay guriga Mamo Khadiijo” ayuu yiri Masuul ka tirsan Wasaaradda Warfaafinta Somalia kaas oo codsaday inaan magaciisa la sheegin xaalad amaan darteed.
Sarkaal ka tirsan Ciidanka Booliska Somalia kana mida hogaanada Ciidamada amaanka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Gaashaanle Cabdow ayaa damiintay ninka la qabtay ,intaan loo ogolaan ka mid noqoshadda Hay’ada Sirdoonka NISA.
Ila wareedyo muhiima ayaa xaqiijiyay in Wasiirka Warfaafinta Somalia Mohamed Abdi Hayir la shaqeeyo Al-Shabaab ,iyadoo la sheegay inuu haweeneey la shaqeeysa u xilsaaray khaarijinta 24 qof oo ka tirsan NISA iyo Wasaaradda Warfaafinta kuwaas oo Hindiya Haji iyo Sarkaal shalay lagu dilay Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Mohamed Abdullahi Gardhuub ay ku jireen liiska 24 qof.
Liiska 24 qof ee labo ka mida la dilay waxaa ku jira seddex Wariye oo ka hoowlgala SNTV iyo Radio Muqdisho kuwaas oo la rumeeysan yahay inuu khilaaf xoogan kala dhaxeeyo Wasiir Xayir Maareeye.
Haweeneeyda Xayir Maareeye u xilsaaray khaarijinta Wariyeyaasha iyo Saraakiisha NISA ayey Ciidanka Gaashaan ku raadjoogaan.
Sikastaba ha ahaatee,Sirdoonka Mareykanka iyo kuwa Dowladda Federalka ayaan weli ka hadlin Sarkaalka la qabtay